Fomba fampiasana Font Awesome amin'ny Illustrator sy fampiharana hafa | Martech Zone
Ny zanako lahy mila karatra fandraharahana ho an'ny orinasam-pamokarany DJ sy mozika (eny, saika nahazo ny Ph.D izy tamin'ny matematika). Mba hamonjy habaka rehefa mampiseho ny fantsona sosialy rehetra ao amin'ny karatry ny orinasany dia te-hanome lisitra madio amin'ny fampiasana ireo sary masina isaky ny serivisy izahay. Raha tokony hividy ny tsirairay amin'ireo logo na fanangonana avy amin'ny tranokala sary izahay dia nampiasa Font Awesome.
Ny Font Awesome dia manome anao sary masina azo ovaina azo ahodina eo noho eo - habe, loko, aloka, ary izay mety ho vitanao amin'ny herin'ny CSS.
Ny endri-tsoratra dia miorina amin'ny vector ary azo ovaina amin'ny tetikasanao, noho izany dia lavorary izy ireo amin'ny fampiasana amin'ny rindrambaiko birao sary toa ny Illustrator na Photoshop. Azonao atao koa ny mamadika azy ireo ho any amin'ny drafitra ary mampiasa azy ireo amin'ny sary.
Font Awesome dia be mpampiasa hanampiana ireo logo sy sary masina hafa amin'ny tranokala, saingy mety tsy ho tsapanao fa afaka misintona ny endritsoratra marina hapetraka ao amin'ny Mac na PC anao koa ianao! Ny endritsoratra TrueType (fisie ttf) dia ao anatin'ny Download. Ampidiro ny endri-tsoratra, avereno indray ilay Illustrator dia afaka mandeha ianao!
Tsy ilaina ny fanaovana tsianjery ny toetra amam-panahy tsirairay na ny fitadiavana ny mety, ity ny fomba fampiasana ny endritsoratra:
Sokafy ny Cheatsheet Mahagaga Font ao amin'ny navigateur.
Sokafy ny Illustrator na Photoshop (na rindrambaiko hafa).
Apetraho amin'ny Font Awesome.
Copy sy paste ny toetra avy ao amin'ny cheatsheet mankany amin'ny fisieo.
Izay ihany no ilaina!
Fomba fampiasana Font Awesome amin'ny Illustrator
Ity misy horonan-tsary fohy momba ny fahitako sary masina ao amin'ny Font Awesome ary avy eo ampiasaiko ao anatin'ny rakitra Illustrator ahy.
Fomba fampiasana Font Awesome miaraka amin'ny Photoshop, Illustrator, ary sehatra desktop hafa.
Ity misy topy mason-tsary tsara momba ny fampiasana Font Awesome miaraka amin'ny Illustrator (na sehatra birao hafa).
Mamorona drafitra ho an'ny endritsoratra Fontawesome anao
Ny zavatra iray tokony hotadidina dia ny fisorohana ny fampiasana azy amin'ny sehatra tsy mampiditra ny endritsoratra ary mitaky ny hametrahana azy ao amin'ny rafitra. Ny fampiasana azy amin'ny Word, ohatra, dia mitaky ny handefasan'ny mpandray ny endritsoratra ao amin'ny rafitr'izy ireo mba hahitany azy. Ao amin'ny Illustrator na Photoshop, azonao atao ny mampiasa Create Outlines hanovana ny endritsoratra ho sary vector.
In sary, azonao atao ny mampiasa Create Outlines hanovana ny endritsoratra ho sary vector. Mba hanaovana izany dia ampiasao ny fitaovana Selection ary safidio ny Type> Mamorona drafitra. Azonao atao koa ny mampiasa ny baiko fitendry Ctrl + Shift + O (Windows) na Command + Shift + O (Mac).
In Photoshop, tsindrio havanana amin'ny sosona lahatsoratra. Apetraho amin'ny totozy ny totozy (fa tsy ny kisary [T]) ary tsindrio havanana. Safidio ny menio manodidina Miova ho endrika.
Sintomy ny endritsoratra mahatalanjona
Fampahafantarana: Nanafatra ny karatry ny orinasa izahay Moo ary asio ny rohy mpiara-miasa aminay etsy ambony.
Tags: karatra fandraharahanakaratra fandraharahanaovay ny endritsoratra ho tsipikamanova endritsoratra ho endrikamamorona drafitra endritsoratramamorona drafitradjdownload fontdownload font mahafinaritraendri-tsoratra mahatalanjonaahoana nony fomba fanaovana sary masinamatoantenysarymonstreauMookaratra mooPhotoshopmpamokatramozika sosialy sosialyttfVector